Waxsansheeg News - Xajiyeyaasha adkaysi sarreeya
Astaamaha adkaynta sare
Qalabka adkeynta sare waa fasalka 8.8, Class 9.8, fasalka 10.9, fasalka 12.9 xajiyeyaasha. Qalabka adkeynta sare waxaa lagu gartaa adkaanta sare, waxqabadka gantaalaha wanaagsan, waxqabadka farsamada wanaagsan, adkaanta isku xirnaanta sare, waxqabadka seismic wanaagsan, iyo dhismo sahlan oo dhakhso leh.
Xajiyeyaasha adkaysi sarreeya ayaa badanaa ka samaysan qalab
SCM435 iyo 1045ACR 10B38 40Cr waxay sameyn karaan heerarka 10.9 iyo 12.9. Guud ahaan, suuqa SCM435 wuxuu sameyn karaa wax kabadan 10.9 iyo 12.9 heerar.
1. Bolts: Fasal xajiyeyaal ka kooban laba qaybood, madaxa iyo baalalka (dhululubo leh dusha dibadda), oo lagu waafajin doonaa lowska si loo xajiyo loona xiro laba qaybood oo leh godad. Xiriirka noocan ah waxaa lagu magacaabaa isku xirka xirmooyinka. Haddii lowska aan laga goyn galka xabbadda, labada qaybood waa la kala saari karaa, sidaa darteed isku xidhnaanta boltku waa xidhiidh la arki karo.
2. Daraasad: Fasal xajiyeyaal aan lahayn madax oo leh labada silsiladood oo dibedda ah labada dhinacba. Marka lagu xidho, hal dhamaadka silig-koranka weyn waa in lagu xoqaa qaybta oo leh daloolka gudaha, iyo dhamaadka kale iyada oo loo marayo qaybta leh daloolka, xarkaha weyn ee auger waa in markaa lagu xoqaa lowska, xitaa haddii labada qaybo waa isku xidhan yihiin gebi ahaanba. Xiriirka noocan ah waxaa lagu magacaabaa isku xirka istuudiyaha iyo sidoo kale xiriir la arki karo. Ugu badnaan loo istcimaalo mid ka mid ah qaybaha ku xiran dhumuc weyn, qaab dhismeedka is haysta, ama sababta oo ah kala-baxa soo noqnoqda, oo aan ku habboonayn munaasabadaha iskuxiran.
3. Xargaha: sidoo kale waa nooc ka mid ah xawaaraha adag oo ka kooban madax iyo xoq. Marka loo eego ujeedada, waxaa loo qaybin karaa seddex nooc: mashiinnada mashiinnada, hagaajinta boorarka iyo boolal ujeedo gaar ah Mashiinka mashiinka inta badan waxaa loo adeegsadaa qayb leh dalool go'an, iyo isku xirnaanta xawaaraha ka dhaxaysa qaybta leh daloolku uma baahna in la taaban karo lowska (nooca noocan ah waxaa lagu magacaabaa isku xirka xarkaha waxa kale oo ay ka tirsan tahay isku xirnaanta la arki karo; sidoo kale waxaa lagu rakibay lows si loogu dhejiyo inta u dhaxaysa laba qaybood oo leh godad.
4. Miraha: oo leh godad leh dunno gudaha ah, badiyaa qaabkoodu yahay qaab hexagonal flat ah, laakiin sidoo kale qaab ah sadarka laba jibbaaran ee sagxadda leh ama dhululubo fidsan, oo leh biinanka, dababka ama biraha makiinadaha, oo loo isticmaalo adkaynta iyo isku xidhka laba qaybood in ay wada noqdaan.